Bedelaadda Xeebta ee New Jersey - Ellicott Dredges Blog
Source: Dabool Sheekada QAADASHADA DUNIDA Macdanta & Dhismaha
Trevcon's 12 in., 370HP Ellicott® brand cutter nuugista (CS) qoto dheer qoto dheer Wreck Pond, New Jersey, USA
Howlwadeenka Dredge Ed Whitehurst
Ciidda waxaa lagu sii daayaa 5,000 ft iyada oo loo sii marayo tuubbo loogu talagalay buuxinta xeebta ee harada harada iyo xeebta badda Girt ee dhinaca badda
Qandaraaslayda maxalliga ah ee guryahooda ka shaqeeya waxay caawiyaan aagagga daadadka ee duufaanta duufaantu ku habsato deegaanka dabiiciga ah waxayna dhistaa xeebo.
Wreck Pond waa kheyraad dabiici ah oo 80-acre ah, oo leh geedo abuur iyo guri ka mid ah tuubada tuubada waxayna ku taal bariga ilaa galbeedka aragtida waqooyi-galbeed ee u dhow Badweynta Atlantik. Balli sidoo kale waa xuduudo dabiici ah oo udhaxeysa xaafadaha hodanka ah ee Sea Girt iyo Spring Lake, New Jersey oo xeebahoodu siiyaan dalxiis xagaaga dalxiisayaasha. Warshadaha dalxiiska ee New Jersey waxay siiyaan 400,000 shaqooyin shaqaalaha gobolka waxayna u soo saartaa US $ 30B dhaqaalaheeda.
In kasta oo balligu aanu lahayn adeegsi dhab ah oo bini-aadam ah, haddana waxa uu buux dhaafiyay xilli xilli duufaan ah 2005 oo lagu galay magaalada SpringLake. Wreck Pond wuxuu ku yaal meel u jirta 400 ft ilaa 500 ft oo ka socota Badweynta Atlaantik wuxuuna helaa qulqulka qulqulka illaa 7.0 ft dia. Dhuumaha. Mawjadaha xagjirka ah ee duufaantu waxay balliga ka buuxiyeen ciid waxayna xireen dhuumaha, daadadkana ka dhigaya Lake Lake.
Intaa waxaa dheer imaatinka gargaarka ee Lake Lake si loo nadiifiyo dhuumaha oo looga nadiifiyo magaalada daadadka, daraasad farsamo ayaa socotay oo qayb ka ah Barnaamijka Hindisaha Xeebta ee New Jersey si loo ballaariyo dhuumaha balliga ee 400 ft ee badda si loo wanaajiyo socodka qulqulka, iyadoo la siinayo dhul wanaagsan oo taranka loogu talagalay herring iyo duurjoogta, iyo dhismaha xeebta dhinaca Atlantic.
Qandaraaslaha Badda Trevcon Construction Co. ee Liberty Corner, NJ wuxuu ku guuleystay qandaraaska isagoo raacaya jihada Ron Treveloni. In kasta oo ay sameysay qashin qubis farsamo ahaan, shirkaddu waligeed ma yeelan qashin-biyoodka waligeedna waligeedba waa la sii daayay.
Trevon wuxuu go'aansaday inuu iibsado 12 gudaha., Ellicott® astaanta 370 cutter nuugista (CS) dredge Oktoobar 2005 ka dib sannadihii 17 ee waxqabadka iyo deked dhismeedka.
Go'itaanku wuxuu bilaabmay bartamihii Diseembar 2005 wuxuuna sii socday bartamihii bishii Marso 2006, isagoo ka saaray qaar ka mid ah '80,000 yd3' oo ciid ah Wreck Pond oo ka sii qoto dheer laga bilaabo 3.0 ft illaa 7.0 ft. Meesha la gooyay waxay ahayd mid kuxoogan 10 ilaa 20 ac. qayb ka mid ah balli u dhow badda.
Ciidda ayaa lagu sii daayay 5,000 ft iyada oo loo sii marayo tuubbo loogu talo galay buuxinta xeebta ee harada Guga iyo Xeebta Badda.
Gooseedka iyo dheecaanka 'balliga' oo ku urursanaa woqooyi-galbeed ee balli sannadihii la soo dhaafay, oo qulqulka qulqulka ah ee lagu keydiyo xeebaha, ayaa sababay waqtiyadii la soo dhaafay xeebta. Kuwaas waa la yareyn doonaa oo la daaweyn doonaa goor dambe, sida uu sheegayo Mr. Treveloni.
Waxaa laga daabacay WORLD DREDGING Macdanta & Dhismaha
'Trevcon's 12 in., 370HP Ellicott® Brand cutter nuugista (CS) waxay qoto dheereysaa Wreck Pond, New Jersey, USA